Su'aalaha La Weydiiyo - Linyi Juda Sayniska iyo Teknolojiyada Ilaalinta Deegaanka ee Injineeriyada Co., Ltd.
Ka waran sharaxaadda sheyga?
Ka waran habka wax soo saarka?
Nuuradda iyo dhuxusha ayaa siday u kala horreeyaan loogu quudiyaa qasnadaha keydka forklift. Qeybaha hoose ee haamaha waxay leeyihiin hofer miisaamaya otomaatig ah. Ka dib markaad miisaamto sida ku cad qadarka kombiyuutarka, dhagaxa nuuradda iyo dhuxusha ayaa isku jira. Waxyaabaha isku dhafan waxaa lagu qaadayaa gaariga boodka iyada oo loo marayo buundada u janjeera xagga sare ee liinta, ka dibna si siman ayaa loogu rusheeyaa foornada iyada oo loo marayo qalabka wax lagu raro iyo qalabka quudinta.
Maxaa ku saabsan astaamaha alaabta?
Ka warran adeegyadaada?
Adeegyada Pre-sale: Waxaan ku siineynaa qorshaha prophase, habka socodka habka iyo qalabka soo saaraha iyadoo loo eegayo baahidaada gaarka ah.
Adeegyada Iibinta: adeegaha U dir farsamo yaqaanada jobsite-ka si uu u hago rakibaadda iyo hagaajinta, tababbarayaasha hawlwadeenada iyo dhammeynta jeegga oo ay u wada aqbalaan.
Adeegyada Iibinta Kadib: Daacadnimo Si loo dhiso saaxiibtinimo waqti dheer ah, waxaan si joogto ah u bixin doonnaa booqashada laabashada ee macaamiisha.
Haa. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa soo booqda warshadeena sannad kasta.
Muddo intee le'eg ayay damaanad qaadka qalabkaagu? Ma keentaa qalab dayactir ah?
Muddadayada dammaanad qaadistu waa hal sano guud ahaan. Waxaan bixin karnaa qalab dayactir ah.
Ma bixisaa tababar ku saabsan hawlgalka qalabka?
Haa. Waxaan u diri karnaa injineero xirfad leh goobta shaqada qalabka rakibida, hagaajinta, iyo tababarka howlgalka. Dhamaan injineeradeenu waxay leeyihiin baasabooro.
Maxaa ku saabsan bixinta?
30% TT deposit, 70% bixinta dheelitirka oo ka dhan ah nuqulka dukumiintiyada asalka ah.
Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide,